🥇 ▷ IFA 2019: Wax kasta oo aan filayno inaan aragno ✅
IFA 2019: Wax kasta oo aan filayno inaan aragno
Waxaan horay u soo aragnay sida CES iyo MWC oo horaantii sanadkaan ah, laakiin meesha kama saari karno Internationale Funkausstellung (oo loogu magac daray IFA 2019). Waa shirkii ugu tegay teknolojiyadda ugu weyn Yurub waxayna 6-Sebtember bilaabmaysaa Berlin, Jarmalka sannadkan. Waxay socon doontaa illaa 11-ka Sebtembar, iyadoo la bilaabayo laga bilaabo 4ta Sebtember.
IFA 2019 waxaa lagu qiimeeyaa qaar ka mid ah shirkadaha ugu caansan teknolojiyada, iyagoo raadinaya marxalad lagu soo bandhigo aalado cusub (oo ay ku jiraan taleefannada, TV-yada, iyo wearable) iyada oo aan la qaban munaasabad calan xoogleh. Waxay awood u yeelan doonaan inay soo jiitaan muuqaal balaaran oo ah isha isha ee IFA 2019, marka waa kuwan dhamaan aaladaha aan rajeynayno inay ku furaan IFA 2019 dhamaadka isbuucaan:
Wax kasta oo aan ka fileynno IFA 2019
1. Nokia 6.2, Nokia 7.2
Shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ayaa bilaabaysa taleefannadooda bidix iyo bidix, shirkadda HMD Global kuma aysan guuleysan inay hesho hiigsiga sannadka 2019. Hase yeeshe, shirkadda finland waxay qorsheyneysaa inay ku dhaqaaqdo furitaanka labo taleefan oo cusub oo caan ku ah Nokia sida Nokia 6.2 iyo Nokia. 7.2 at IFA 2019. Shirkadda ayaa durbaba dirtay casumaadyo, kuwaas oo tilmaamaya imaatinka Nokia 9.1 Pureview ee Sept 5 sidoo kale.
Sawirka Via: Baidu
Labada Nokia 6.2 iyo Nokia 7.2 ayaa la rajeynayaa inay ku soo baxaan 6.3 inji ama ka weyn oo muujinaya full-HD ah, oo leh xarig wareega wareega oo martigelinaya 48MP dareemaha koowaad ee gadaal. Labada aaladood waxaa lagu xantaa in lagu xoojinayo isla ‘Snapdragon 660 chipset’ kaas oo isna awooda Nokia 8.1. Taasina waa wax aad looga xumaado markii aad haysatid Snapdragon 675 cusub iyo sidoo kale Snapdragon 730 chipset sidoo kale ayaa diyaar ah.
Muuqaalka Sawirka: Xperia Blog
Sony Xperia 1 wuxuu ahaa taleefanka casriga ugu horreeyay adduunka ee leh a dhaadheer 21: 9 4K bandhigay, oo bixiya khibrad muuqaal u eg shineemo. Hadda, kooxda weyn ee reer Japenese ayaa lagu xamanayaa inay daaha ka qaaddo guushii calankeeda – Sony Xperia 2 ee Sept 5 at IFA 2019. Sawirrada gacmo-siinta ee loo yaqaan ‘Xperia 2’ ayaa laga soo daayay khadka internetka todobaadkii hore, iyagoo leh naqshad qurxoon oo lamid ah tii ka horreysay, laakiin aan lahayn ereyga waxa hoodda hoostiisa mara.
3. Kirin 990
Huawei ayaa shaaca ka qaadaysa markabkeeda cusub ee casriga ah, Mate 30 Pro, munaasabad lagu furayo Munich markay ahayd Sebtember 19, laakiin, Kirin 990 chipset kaas oo awood u siin doona casrigaan ayaa bilaabi doona IFA 2019 bisha Sebtember 6. Waxaa lagu soo saari doonaa Nidaamka 7 milyan ee TSMC ee EUV, oo kujira Cortex A77 CPU cores iyo Mali G-77 GPU. Waxay noqon kartaa chipset-kii ugu horreeyay abid ee asal ahaan lagu taageero isku xirnaanta 5G.
4. LG V50s ThinQ & G8X
Ganacsiga taleefannada casriga ah ee LG ayaa sii yaraanaya, laakiin shirkaddu wali waxay albaabada u riixaysaa aalado cusub albaab kasta oo caan ah. Waxay soo saartay LG G8 ThinQ iyo V50 ThinQ oo leh shaashad laba-shaashad ah MWC 2019, iyo hadda, waxay raadineysaa inay ku dhisnaato fikradeeda cusub soo-bandhigidda V50s ThinQ oo leh shaashad laba-laab qaboojin ah oo hadda leh muuqaal yar oo dibedda ah. si aad u fiiriso waqtiga, cimilada, iyo ogeysiinta.
Iyada oo shaashadda IFA ee LG ay tilmaamayso kaliya imaatinka cusub ee V50s ThinQ (magaca uu caddeeyay Evan Blass on Twitter), shirkaddu sidoo kale waxay daaha ka qaadi kartaa LG G8X oo leh xog-biyo-soo-qaadis, sawirka sawirka faraha-yar, iyo sawirka laba-kamaradaha. Waxay iska dhaafi kartaa qalabka loo yaqaan ‘gimmicky HandID’ iyo tikniyoolajiyada dhaqdhaqaaqa ee lagu soo bandhigay LG G8 ThinQ.
5. Sonos la qaadan karo
Suuqa hadalka hadalka caqliga leh wuxuu arkay horumar weyn sanadihii la soo dhaafay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, oo leh magac caan ah oo loo yaqaan ‘Sonos’ oo ku soo biirtay ficilkiisa iyada oo la adeegsanayo safka hadalka. Hagaag, dhammaan af-hayeennada shirkadda illaa iyo hadda waa la laalay, laakiin hadda waxay sameynayaan telifoon la qaadan karo oo Bluetooth waxaana lagu shaacin karaa IFA 2019 toddobaadkan. The Sonos S17 ayaa la sheegay inuu yahay “af-haye tayo sare leh oo ku hadla af-hayeenka iyo qayb ka mid ah nidaamka dhawaaqa Sonos. ” Waxay ka buuxsami laheyd gacan-qabsi Alexa iyo Google Assistant, oo ah wax weyn.
6. Shaashadda Laptop-ka
Shirka IFA 2019 kuma koobna bilaabista taleefannada gacanta, si ka duwan shirka MWC 2019 oo leh magac mobilada. Marka, waxaad sidoo kale filan kartaa qaar ka mid ah sameeyeyaasha laptop-ka aad ugu jeceshahay inay soo bandhigaan oo ku soo saaraan alaabo cusub magaalada Toddobaadkan toddobaadkan.
Asus – Shirkadda weyn ee reer Taiwan waxay dirtay casumaad loogu talagalay munaasabadda furitaanka ee 4-ta Sebtember waxaan rajeyneynaa inay casriyeyn doonto khadkeeda ZenBook iyada oo la adeegsanayo 10-Gen processor-yo cusub. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan arko shirkada oo soo saareysa taleefanno casri ah oo wax ka qabanaya safka weligiis sii kordhaya ee Redmi ee qaybta miisaaniyadda.
Acer – Sida Asus oo kale, dhiggeeda Taiwan – Acer waxay dhejisay “keyd taariikhda” macsalaameynta Sebtember 4 oo daaha ka qaaday waxba kama jiraan qorshayaasheeda IFA 2019.
Dell – Dell wuxuu u adeegsaday marxaladda IFA inuu ku faafiyo kumbuyuutarrada loo yaqaan ‘XPS laptops’ cusub, Chromebook, iyo inuu ka hadlo kor u qaadista safka jira. Marka, waxaan rajeyneynaa shirkada inay mar kale lasocoto oo ay ka soo qeyb gasho shirka sanadkaan ee processor-ka 10-Gen Intel casriyeyn ku sameynayo safkooda.
Razer – Qalabka sameeyaha caan ka ah ciyaarta (sidoo kale laptop iyo sameeyaha taleefanka) ayaa sidoo kale dhaleeceeyay joogitaankiisa Munich mid kale “Dunida koowaad” ku dhawaaqida laxiriirta qadka laptop-ka ciyaarta. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno Blade ama Laptop laptop ah oo casriyeynaya shirka IFA 2019 ee Sebtember 4.
7. Galaxy laab
Marka laga soo tago bilowga hore ee kor ku xusan ee IFA 2019, waxaan sidoo kale fileynaa inaan aragno Samsung oo jooga dabaqa show si ay u siiso qof walba fursad uu ku helo khibraddiisa cusub ee loo yaqaan ‘Galaxy Fold’. Waxay kaloo noqon kartaa marxaladda dib-u-bilaabida Galaxy Fold ee masiibada, taas oo macaan u lahaan doonta kuwa sugaya inay gacmahooda ku helaan qalabkan laabma.
8. Bandhigyo Kale
Waxaan ka wada hadalnay taleefannada casriga ah, laptop, iyo xitaa qof caqli badan oo hadla, laakiin sidoo kale waxaa joogi doona imaatinka IFA 2019 – wearables smart. Haa, hadda majirto wax macluumaad ah oo ku saabsan waardiyaha daaha ka qaadaya alaabooyin cusub laakiin waxaan arki karnaa Garmin Fenix ​​6, Alexa-ay taageerto Fitbit Versa 2, iyo dhowr dheeri oo cusub oo laga keenay Fossil (iyo noocyadeeda hoose) ee IFA 2019.
Goobta lagu soo bandhigayo sidoo kale waxaa xusi doona tiro TV-yada QLED iyo OLED ah, iyadoo qaraarada ay gaarayaan illaa 8K iyo cabbirkoodu ilaa 120-inji ah – labaduba run ayey u yihiin soo dejinta Sharp. Samsung, Sony, iyo LG sidoo kale way joogi doonaan si ay u soo bandhigaan telefishanadooda cusub, oo laga yaabo inay taageerto 5G ama lagu laaban karo shirka.
Sidaad sida iska cad u sheegi karto, usbuucan wuxuu noqon doonaa mid xiiso iyo xamaasad leh dhammaanba taageerayaasha fanateetyada aad ka hesho halkaas. Haa, waxaan adeegsaday qalab iyo fanaaniin isla jumladda. Laakiin, waxaan dhammaanteen arki karnaa in IFA 2019 ay marag u tahay bilowga xoogaa miisaaniyada cusub oo cabsi leh ama taleefanno calan, TV-yada, laptops, iyo waxyaabo kaloo badan. Marka, la soco sida aan kuugu soo qaadan doono wararka tooska ah ee dhacdada dabayaaqada toddobaadkan.